Adenosine | Bixa Orellana seed oil | Chaga mushroom extract | Hydrolyzed collagen | Meadowfoam seeds oil | Niacinamide | Soybean oil | Volufiline | Bixa Orellana seed oil
Serum အရည် ၂ လွှာ ပါ၀င်သည့် ဆန်းသစ်မှုကြောင့် အာဟာရဓာတ်နှင့် အတူ အသား‌အရေကို နက်ရှိုင်းစွာ စိုပြေစေပါသည်။ အပင်မှ ရရှိသော အဆီနှင့် အတူ အခြားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက် အရေပြား တင်းကျပ်မှုကို တားဆီးပေးပြီး ရေ - ဆီ ပမာဏ ညီမျှမှုကို ပုံမှန် ဖြစ်စေပါသည်။
အရေပြား တင်းအိမှူကို ကူညီပေးသည့် သဘာဝ အဆီ ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ဆဲလ်များကို အိုမင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အစိုဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးခြင်း
အရေးအကြောင်းများ သက်သာ‌စေပြီး အသားအရေ ပြန်လည် သန်စွမ်းလာစေခြင်း
အသားအရေ စိုပြေစေခြင်းနှင့် အသားအရေ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေခြင်း
အသားအရေ ဝင်းလက်စေ၍ အရောင် ညီအောင် ညှိပေးခြင်း
အသားအရေ အေးဆေးတည်ငြိမ်စေပြီး နေရောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
အကြံပြုချက် ၊ အသုံးမပြုခင် လှုပ်ပေးပါ။
Russian Chaga Triple Serum Fluid သည် အဆီလွှာနှင့် ရေလွှာ ပါဝင်ပြီး သဘာဝပစ္စည်းများသာ ပါဝင်ကာ ဓာတုပစ္စည်းများ မပါဝင်ပါ။
Skin boosting effect!
အရေပြား၏ အသက်ရှူ အပေါက်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး အသားအရေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေခြင်း
Oil Poly-Keeping System သည် အစိုဓာတ်တွင် လာရောက် စုဆောင်းသည့် ပူဖောင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ပိတ်ဆို့နေသော အရေပြားတွင် အစိုဓာတ် ဖြည့်တင်းပြီး ထိန်းသိမ်းပေးရန် အထူး အဆီ အခြေပြု အစိုဓာတ် အမြှေးပါးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
အာဟာရဓာတ်နှင့် အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အလွှာစနစ်
အဆီနှင့် ရေ အလွှာများသည် အရေပြားပေါ်သို့ ဖြန်းသည့်အခါ အရေပြားပေါ်တွင် ရောနှောပြီး အညီအမျှ ဖုံးအုပ်ပေးကာ အာဟာရဓာတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
All in Anti-wrinkle & Brightening.
အသုံးပြုနည်း Triple Serum Fluid
အဆီနှင့် ရေလွှာကို ရောနှောစေရန် ကောင်းကောင်း လှုပ်ပေးပါ။
မျက်လုံးကို ပိတ်ထားပြီး ၁၅-၂၀ စင်တီမီတာ အကွာအဝေးမှ မျက်နှာနှင့် လည်ပင်း အနှံ့အပြားတွင် ဖြန်းပေးပါ။ အရေပြားတွင်း စိမ့်ဝင်စေရန် မျက်နှာ အနှံ့အပြား နူးညံ့စွာ ထိပုတ်ပေးပါ။
အဆီနှင့် ရေလွှာ ၂လွှာ ပါဝင်သော spray